थाहा खबर: 'सगरमाथाको गहिराइ'को जन्म र यात्रा
'सगरमाथाको गहिराइ'को जन्म र यात्रा
र, तराईयौँ केजी नमस्कार!
'पद्मश्री साहित्य पुरस्कार' मैले पाएको हैन, मैले कविता सुनाइरहेका युट्युबका भिडियोहरूले पनि पाएका हैनन्, 'सगरमाथाको गहिराई' नाम गरेको कविताको पुस्तकले पाएको हो।
जन्मिँदा हाम्री छोरी दुई सय तीस ग्रामकी जन्मेकी थिई। छोरीलाई पहिलोपल्ट हातमा लिएको बेला उसकी आमाका आँखाबाट हिमालौँ लिटर आनन्द बगेको थियो। त्यो पल गाजलले पहिलो पल्ट थाहा पाएको थियो- अरुमा डुबेर बग्नुमा कति मज्जा आउँछ! त्यसैले मैले बुझेको आनन्दको रङ गाजलसँग मिसिदै गरेको तर मिसिइनसकेको कलिलो आँशुको जस्तो हुन्छ।
जन्मिँदा हाम्री छोरी छत्तीस वटा मुटु लिएर जन्मेकी थिई। छोरीलाई पहिलोपल्ट हातमा लिएको बेला उसकी आमाका दुई सय छ वटै हड्डीहरुलाई तराईयौँ केजी तातोले छोएको थियो। त्यो पल हड्डीहरुले पहिलोपल्ट थाहा पाएका थिए- आफैँ थर्मोमिटर बनेर मायाको ज्वारो नाप्नु कस्तो हुन्छ! त्यसैले मैले बुझेको मायाको रङ चिसोले दुखेर रोइरहेका छातीका अनिदा हड्डीहरुलाई मायाको ज्वरो आएका हत्केलाहरुको तातो स्पर्शजस्तो हुन्छ।
यसरी जन्मेकी हाम्री छोरी एउटा यात्रामा निस्की। धेरै मान्छेले उसालई देखे, धेरै तरिकाले देखे। कसैलाई उसको कपाल हल्लिदाँ देखिने ढाँचा मन पर्‍यो। कसैलाई उसका खुट्टाको चालमा रहेको संगीत मन पर्‍यो। कसैलाई उसको पहिरनमा लुकेको डिजाइन मन पर्‍यो, त्यहाँका बुट्टाहरु मन परे। कसैलाई ऊ बोलेको मन पर्‍यो, कसैलाई चुप बसेको। कसैलाई ऊ रिसाएको मन पर्‍यो, कसैलाई ऊ लजाएको। कुन्नि किन हो धेरैलाई ऊ रोएको मन पर्‍यो, सायद उनीहरु पनि ऊजस्तै कुनै दिन रोएका थिए होलान्। उनीहरुलाई लाग्यो होला कि रुने म एक्लो हैन रहेछु, मसँगै रुने मजस्तै मेरा साथी पनि रहेछन्। हामी सबैले खोजेको आफू भेटिने अर्को एउटा साथी त हो नि!
कसैकसैलाई उसका केही पनि मन परेनन्। हामीले त्यो पनि स्वीकार गर्‍यौँ। तर छोरीलाई भन्यौँ, "छोरी, सबैलाई तिमी मन नपर्ला। सबैले सबैलाई मन पराउन सम्भव नै छैन, आवश्यक पनि छैन। तिमीलाई कुनै एक जनाले त पक्कै मन पराउनेछ। अझ उसले तिमीलाई त्यसरी मन पराउनेछ कि यसरी अरु कसैलाई मन पराउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिले कसैलाई थाहा थिएन। यसरी आफूलाई मन पराउने मान्छे चाहिएको हो सबैलाई। त्यही एउटा मान्छे! उसले तिमीलाई मन पराउनेछ, जसरी तिम्रा बाआमाले एक–अर्कालाई मन पराए, तिमीलाई उसले मन पराउने गरी, अति तिमी जन्मियौ।"
र, तराईयौँ केजी धन्यवाद!’
(खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानबाट आयोजित ‘द्मश्री साधना सम्मान तथा साहित्य पुरस्कार वितरण समारोह'मा पुरस्कृत कवि नवराज पराजुलीले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य।)